Ndechipi chinangwa chehupenyu maererano neBhaibheri ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Chii chiri chinangwa chehupenyu zvinoenderana neBhaibheri
Chii chiri chinangwa chehupenyu zvinoenderana neBhaibheri. Sezvo mwana wevanhu ari munyika ino akashamisika chii chinonzi kukosha kwekuvapo kwayo. Iyo ingangove yakakura kwazvo isingazivikanwe yehupenyu hwedu. Tiri mhuka dzine musoro uye saka tinoda kutsvaga kupindura kuchokwadi ichi kuburikidza nemutemo wechikonzero uye mhedzisiro.
Nekudaro, kunyange hazvo vanhu vazhinji vachidzungaira kuburikidza nehupenyu vasingazive kwazvo mararamire or vasina chinangwa chaicho, kumukristu wese, mubvunzo uyu une mhinduro yakajeka. Tine chikwereti chete verenga woongorora Bhaibheri kuti uzive.
1 Chii chiri chinangwa chehupenyu maererano neBhaibheri: Tsananguro ine ndima
2 Maitiro ekuzadzisa chinangwa chisina kutumwa naMwari
Chii chiri chinangwa chehupenyu maererano neBhaibheri: Tsananguro ine ndima
Chinangwa chehupenyu zvinoenderana neBhaibheri
Bhaibheri rinoti chinangwa chechokwadi chehupenyu hwedu chakavakirwa pakuve padyo naMwari. Akatisika kuti timurumbidze uye tive noukama naye.Kuburikidza naJesu tinowana chinangwa muupenyu.
murudo akatitemera kare, kuti vagoitwa vana vake kubudikidza naJesu Kristu, zvichienderana nerudo chairwo rwechido chake,
kurumbidzo yekubwinya kwenyasha dzake, dzaakatiita kuti tigamuchire muMudiwa.
VaEfeso 1: 5-6
Mwari ndiye Musiki wehupenyuNdosaka ari Iye anopa kukosha kuhupenyu. Mwari akatisika kuti timurumbidze. Akatisika nenzira yakasarudzika, kuratidza kubwinya kwake uye rudo rwake kuburikidza nesu. Ichi ndicho chirevo chikuru cheupenyu.
Mhuka dzesango dzichandikudza, makava nehuku dzemhou; nekuti ini ndichapa mvura murenje, nenzizi musango, kuti vanhu vangu, musanangurwa, vanwe.
Guta rino ndazvigadzirira; kurumbidza kwangu kuchaparidza.
Isaya 43: 20-21
Chinhu chimwe chete chinogona kuzadza chishava muhupenyu hukama naMwari »... by sezvo vese vakatadza, vakakundikana kusvika pakubwinya kwaMwari, vacharuramiswa pachena nenyasha dzake, kubudikidza nerudzikunuro rwuri muna Kristu Jesu.—VaRoma 3:23-24. Muna Mwari tinowana rugare, kugutsikana uye mufaro. Hapana chimwe chinhu chingape chinangwa chaicho kuupenyu. Rudo rwaMwari runopa chinangwa kuhupenyu.
Nekuda kwechivi, vanhu vakabva kuna Mwari. Chivi chinosiya kushaya chinhu kukuru mumoyo medu, nekuti chinotitorera kure kune avo vanopa chinangwa kuhupenyu hwedu. Isu tinoedza kuzadza nzvimbo isina zvimwe zvinhu, senge mari, mhuri, uye kubudirira, asi izvo zvinhu hazvimbotigutsi zvizere. Mwari wega ndiye anopa chinangwa kuhupenyu.
Ipapo ndakatarisa mabasa ese akaitwa nemaoko angu, nebasa riya rekuzviita; asi tarira, zvose zvakanga zvisina maturo, nokushushikana kwemweya, zvisina basa pasi pezuva.
Muparidzi 2: 11
Jesu akauya kuti tive noukama naMwari zvakare. Pamuchinjikwa akatora chirango chezvivi. Zvino avo vanopfidza zvivi zvavo uye vagamuchira Jesu seMuponesi wavo, zvakare vakabatana naMwari. Hupenyu hune musoro!
Maitiro ekuzadzisa chinangwa chisina kutumwa naMwari
Mwari ndivo vanopa zvinoreva kune zvese zvatinoita muhupenyu. Patinoisa Jesu secompass yedu 'kuchamhembe', hatina kuvhiringidzika uye Kuburikidza nehutungamiriri hwako tinogona kubudirira zvinhu zvikuru. Avo vanoda Jesu vane zvinangwa zvakakura zvinoverengeka, izvo zvinowedzera kukosha uye zvinoreva hupenyu pasi pano, saka tinofanira:
Teerera Mwari: Mirairo yaMwari yakanaka uye Ivo vanotibatsira kurarama nechinangwa.
End end。 Kuguma kwekutaura kwese kunonzwika ndouku: Itya Mwari, uchengete mirairo yake; nokuti ndizvo zvakaita munhu.
Muparidzi 12: 13
Paridzira vhangeri rake. Nenzira iyoyo zvakare uchabatsira vamwe vanhu kuwana chinangwa choupenyu.
Jesu ndokuswedera akataura kwavari, achiti: Simba rose rakapiwa kwandiri kudenga nepanyika. Endai naizvozvo muite vadzidzi vemarudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, nero Mwanakomana, neroMweya Mutsvene; muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurairai imi; uye tarisai, ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika. Ameni. Mateu 28:18-20
Nakidzwa nehupenyu: tisina Mwari, mafaro ehupenyu haatipedze; asi, naMwari, tinogona kuwana kugutsikana kwechokwadi mune zvese zvakanaka izvo Mwari anotipa, kunyangwe zvakapusa.
Hezvino, zvino, izvo zvakanaka zvandakaona: kuti zvakanaka kudya nekumwa, nekunakirwa nezvakanaka pabasa rako rose raunozvineta naro pasi pezuva, mazuva ese ehupenyu hwako aakakupa Mwari ; nekuti ichi chikamu chako.Saizvozvovo, kumunhu wese Mwari waanopa fuma nezvinhu, uyezve achimupa simba rekuzvidya, nekutora mugove wake, nekufarira basa rake, ichi chipo chaMwari. Muparidzi 5: 18-19
Kuda vamwe: kuda vamwe vanhu kunoita kuti upenyu huve nechinangwa, kana tichida vavakidzani vedu tinenge tichirarama Chinangwa chaMwari.
Uye ida Ishe Mwari wako nemoyo wako wose, uye nemweya wako wose, uye nefungwa dzako dzose, uye nesimba rako rose. Uyu ndiwo murairo mukuru. Newechipiri wakadai ndeuyu: Ida umwe wako sezvaunozvida iwe. Hakuna mumwe murairo mukuru pane izvi. Mako 12: 30-31
Wedzerai uye mutonge nyika: kuve chikamu chemhuri, kushanda nekutarisira nyika yedu zvinhu zvakanaka kwazvo izvo vanotora zvinoreva chokwadi muna Jesu.
Zvino Mwari wakasika munhu nemufananidzo wake; akavasika murume nemukadzi. Zvino Mwari wakazviropafadza, akati kwavari: Berekanai muwande; zadzai nyika, muikurire, mutonge pamusoro pehove dzegungwa, nepamusoro peshiri dzedenga, nepamusoro pemhuka dzose dzinofamba pamusoro penyika. Genesisi 1: 27-28
Patinotanga kutsvaga Humambo hwaMwari, Anotipa nezvimwe zvese. Kana isu tikaziva rudo rwaMwari, hupenyu hune chirevo chakajeka. Kutenda kwavari tinorasikirwa nekutya uye tinowedzera kuvimba kwedu maari.
Sezvo tichiva nenguva dzekufara nekuomerwa, tinozosanganawo nenguva dzakaoma. Musiyano uri mune zvatinotenda. Kana tikatenda muna Jesu tinotanga kusangana nematambudziko nemafungiro akasiyana. Jesu akati tichava nematambudziko nematambudziko, asi Akakunda nyika uye ari kudivi redu, naizvozvo, hatina chatinotya.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chakubatsira kuti unzwisise chii chiri chinangwa chehupenyu maererano nebhaibheri. Kana ukashamisika ungaziva sei kana Mwari anewe, ramba uchivhura Ziva.online.
Ungaponeswa sei maererano neBhaibheri
Maitiro ekuita pamusoro peiyo isingakudzwe rudo